I-Semalt Islamabad Expert Ichaza ama-Top 10 amabhuzu Okufanele Uyazi Ngawo
Ama-Botnets kanye ne-bots ahlotshaniswa nabaqashi nabakwa-cybercriminals beba idatha, izinombolo zekhadi lesikweletu kanye nobunikazi babasebenzisi kwi-intanethi. Ama-bots avame ukwenza izinhloso ezinhle futhi, futhi ukuhlukanisa ama-bad ama-bots aphezulu angenza umehluko wokuthi uzovikela kanjani isayithi lakho futhi uqinisekise ukuthi ithola ithrafikhi yekhwalithi kusukela ku- injini yokusesha . Cishe wonke ama-bots ahle abathunyelwa yi-Google, i-Bing, ne-Yahoo ukuze abhale okuqukethwe kwamaspredishithi ezokuxhumana nabantu kanye nemiphumela yabo yosesho. Uma ufuna ama-bots okuhle ukuvakashela isayithi lakho, kufanele wazi konke okuphathelene nabo. Ngokuqinisekile bayokuletha inzuzo nangempumelelo, futhi ukuyivala kungaphazamisa isayithi lakho kwi-intanethi. Ngesikhathi esifanayo, kufanele uqaphele ukuvala ama-bad bad.
UMichael Brown, onguchwepheshe ophezulu Semalt , uxoxa lapha kubhujimi abayishumi okumele uwazi ngakho.
Kuyinto bot ye-Google yokukhahlaza bot futhi ngokuvamile kuthathwa njengo spider. I-Googlebot isebenzisa inqubo ye-algorithmic futhi inquma ukuthi yiziphi amawebhusayithi namabhulogi akulungele ukukhishwa. Ithola isayithi ngayinye ngokwehlukana ngokusekelwe kokuhlelwa kwayo kanye nekhwalithi yombhalo. Inqubo ye-Googlebot yokukhwabanisa izinkanyezi ohlwini lwama-URL wekhasi lewebhu olwenziwe ezinye izinqubo zendlela yokukhwabanisa futhi zandiswa nge-Sitemap idatha enikezwe abakwa-webmasters. Uthola ngokuhlakanipha izixhumanisi ezifana ne-HREF ne-SRC emakhasini wewebhu futhi uyabenezela ohlwini lwazo lwamakhasi ukuze zibekwe indexed.
i-Baiduspider i-robot yenjini eyaziwa kakhulu yase-Chinese, i-Baidu Chinese. Lokhu kuyinjini yokucinga ehamba phambili yaseChina yamafayela alalelwayo, izithombe, kanye nokuthunyelwe kwebhulogi.
3. I-MSN Bot / iBingbot
Le robot noma i-bot yokukhwabanisa i-web isetshenziswe yi-Microsoft futhi iqoqa ulwazi kusuka kumawebhusayithi ukwakha indiza yokusesha ye-Bing yokusesha injini.
4. I-Yandex Bot
Ibhodlela le-Yandex yi-Yandex yokusesha injini noma ukukhwabanisa..I-Yandex inkampani edumile yaseRussia esebenza eyodwa yezinjini zokusesha ezinhle kunazo zonke eRussia ngamasheya angaphezu kuka-60% amasheya kuleli zwe. I-Yandex ibhalwa njengesihlanu yokusesha engcono kunazo zonke emhlabeni futhi inezingcingo ezingaphezu kwezigidi ezingu-130 nsuku zonke kusukela ngo-September 2017 nezivakashi ezingaphezu kwezigidi ezingu-23.
5. I-Soso Spider
I-Soso.com enye injini yokusesha yaseShayina. Yimpahla ye-Tencent Holdings Limited, inkampani eyaziwa ngokudala i-QQ. Kusukela ngo-2015, i-Soso ibhekwa njenge-35th best, futhi indawo evakashelwa kakhulu emhlabeni kanye ne-website ye-12 engcono kunazo zonke ye-China, futhi simo sibuyekeziwe nge-Alexa. I-Soso ithola ukubukwa kwamakhasi angu-21,063,490 nsuku zonke.
I-Exabot iyi-crawler ye-web edumile yaseFrance, eyasungulwa ngo-2000 yi-Dassault Systèmes. Leli phayona lensiza lokusesha lilandela amaphrojekthi amaningi ezobuchwepheshe be-mega-budget. I-ExaLead isinikeza ulwazi olunembile nolusizo kusuka kwi-intanethi.
7. I-Sogou Spider
I-Sogou.com ingenye injini yokusesha yaseShayina, eyasungulwa ngo-Agasti 2010. Okwamanje, isikhundla sayo singu-121 kuhlu lwe-Alexa's Internet. U-Sogou usinikeza inkomba yamakhasi ewebhu angaphezu kwezigidi eziyishumi.
8. I-Google Plus Yabelana
I-Google Plus isenza sikwazi ukwabelana ngezincomo nabangani bethu, amalungu omndeni kanye nabanye abantu emhlabeni ngokusebenzisa usesho lwe-Google. Inkinobho yayo isiza ukuqalisa amakhono esabelo se-Google futhi isinikeza izindlela zokunikeza izivakashi zethu into ukuze sizame.
9. I-Hit yangaphandle ye-Facebook
i-Facebook ivumela abantu ukuthi bathumele izixhumanisi zokuqukethwe okuwusizo nokufundisa kubangani babo emithonjeni yezenhlalo. Uhlelo lwayo lusebenza ngokusebenzisa ukubonisa okwesikhashana kwezithombe nemininingwane kunikezwa ngokuqukethwe kwewebhu, njengezihloko zamakhasi, ama-URL, amavidiyo nezithombe. Uhlelo lwe-Facebook lungalula kalula ulwazi uma umsebenzisi enikeza izixhumanisi.
10. I-Google Feedfetcher
I-Google isebenzisa ukuze ibambe i-Atom ne-RSS feed uma abantu bengeze kuma-homepages we-Google Reader ne-Google. I-feedfetcher iqoqa futhi ivuselele ukuphasiswa okuqaliswe ngumsebenzisi futhi ayibakhonzi ekusesheni kwe-Bing namanye amasevisi we-Google.